Egwuregwu Kinetic Road bụ onye na-azụ ọzụzụ mara mma? - Nyocha
Isi > Nyocha > Kurt kinetic road machine review - Ibọrọ maka nsogbu ndị a
Kurt kinetic road machine review - Ibọrọ maka nsogbu ndị a
Egwuregwu Kinetic Road bụ onye na-azụ ọzụzụ mara mma?
NaKinetic Road Machine Smart2 bụ otu n'ime ụgwọ kachasị mmasmart ọzụzụdị ugbu a nke nwere ntụkwasị obi dị ka ime ụlọọzụzụngwaọrụ na nke ahụ na - enye gị ohere ịnweta ụwa nke ịgba ọsọ ikuku.
Hey ụmụ okorobịa, Bobby ebe a na Test Editor na Bicycling. Anyị nwere ọtụtụ ndị nkuzi ọhụụ ebe a, yabụ, m ga-ewe ụlọ ma tinye kilomita ole na ole wee hụ ka ha si arụ ọrụ. Ha dị njikere maka ojiji ọzọ na Elite Nero Interactive Rollers na ha chọrọ nhazi obere karịa ọkọlọtọ ọkọlọtọ.
Have ga-ekpughere ha, gbaa mgba abụọ, ị ga-etinye ihe ihu ihu na wiil nke igwe gị, nke bụ ntakịrị echiche, mana akara akara gụsịrị akwụkwọ ga-enyere gị aka. Yak ise nte mmọ ẹnamde. Ihe mbụ ị ga - ahụ bụ na eku esighi ike n’elu ala.
Ọ na-amị amị azụ na azụ, nke a na-ewute ntakịrị na mbụ n'ihi na ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya na rollers ị maara na mgbe igwe kwụ otu ebe na-aga n'ihu ọ na-apụtakarịghị gị ihe ọma, mana na nke a, yana Site na nnwere onwe dị na rollers ịkwaga site n'otu akụkụ ruo n'akụkụ, ị ga-enwetakwa mmetụta ebumpụta ụwa ahụ na-apụta mgbe ị na-akwọ ụgbọala kwa ụbọchị. Ma uru ọzọ nke ijegharị na azụ ahụ bụ na ọ dị mfe ibili na rollers. Ewezuga ọrụ ndị na-enye gị ahụmịhe ịkwọ ụgbọala dị mma karị, ha bụ n'ezie ọrụ ọgụgụ isi.
Anyị na-anya ụgbọala na Zwift na Central Park ugbu a, m na-arịgoro obere ugwu ma enwere m ike ịnwe na nguzogide na-agbanwe ngwa ngwa. N’ezie, ọghọm dị na ya bụ na ị ga-akpachara anya ka ị kpọchighị ebe ọ bụla. Gịnị ma ọ bụrụ na ị chọghị inwe mmachi na mkpọchi? Yiri onye na-enye ọzụzụ ọdịnala, nke a na-eme ezigbo ihe ọzọ. (Upbeat music) Nke a bụ Kickr Core, nke bụ nhọrọ etiti n'etiti Kickr na Kickr Snap.
Nanị ihe dị iche na-arụ ọrụ, watatt karịrị 1800 watts na ọ bụ naanị ihe nkedo gradients nke ihe ruru 16% kama 20%. Ọ dịkwa obere karịa Kickr. Ọ dịtụ mfe ịhapụ.
Ọ dị ntakịrị mfe iji ndị di na nwunye ngwa ngwa na ngwa ngwa, yana njikwa Zwiftit site na ngwa Wahoo. Ọ kwụsiri ike, ọ dị jụụ, nke ahụ bụ n'ezie otu n'ime ihe ndị mere onye nchịkwa a ji bụrụ otu n'ime ọkacha mmasị anyị n'ihi na ọ na-arụ ọrụ. (egwu dị egwu) Nke a bụ Tacx Neo 2T.
Ọ bụ otu n'ime ndị na - azụ ọzụzụ dị oke ọnụ ị nwere ike ịzụta, mana ọ jupụtara n'ọtụtụ atụmatụ na - abụghị nke ịchọta ndị sneakers dị ọnụ ala. Otu n'ime atụmatụ ya pụrụ iche n'ezie bụ eziokwu na ịchọghị ka njikọ mgbidi gbaa iji mbanye. Igwe ahụ na - emepụta ihe na - eguzogide ya na ntanetị ọlaọcha site na cassette yabụ ka m na - anya ya, ọ na - emepụta mgbochi ma na - eme igwe ahụ.
Ugbu a swing anaghị arụ ọrụ ọfụma dịka ọ na - arụ ma ọ bụrụ na etinyere ya. Ọ bụrụ na ị kwụsị ịgha azụ ọ ga - akwụsị ngwa ngwa. Nke a pụtara na nke a bụ otu n'ime obere sneakers amamịghe nke ị nwere ike itinye n'ụgbọala gị wee banye agbụrụ na ụgbọala na ebe a na-adọba ụgbọala.
Ugbu a, anyị etinyela aka na ya. Nguzogide anaghị enwe mmetụta dị iche, mana nnukwu mgbanwe, ị nwere ume ugbu a. Onye na-enye ọzụzụ a na ngwa ahụ ị nwere ike ịhazi ụzọ dị iche iche nke ihe mgbochi ehi (onye ọzụzụ hums) nkume siri ike, ị nwere ike ịmegharị ụgbọ ala na ice, gịnị ma ọ bụrụ na ị na-agbasi ike (ụkwụ ụkwụ ahụ), nkwụsi ike ahụ abanye gị.
Gịnị kpatara ị chọrọ ọgbaghara na nke a amaghị m. Ugbu a, a na-ebo anyị ebubo na Zwift. Naanị ịrịgo dị mkpirikpi ebe a na Central Park na nguzogide ahụ na-agbanwe n'ezie.
Onye na-enye ọzụzụ ahụ ka dịkwa jụụ. Theda na-agbanwe obere ka ị na-esikwu ike. Ọ bụghị nnukwu ahịa ahụ.
Onye na-enye ọzụzụ a dị oke ọnụ, mana ọ dịkwa oke mma. O nwere ọtụtụ mgbịrịgba na mkpọrọhịhị. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ itinye ya n’ụgbọ ala gị ma were ya n’ ebe a na - adọba ụgbọala mgbe ị na - achọghị ịtụ ya na mgbidi, nke a bụ ezigbo nhọrọ mgbe niile.
Nke a bụ Kinetic Road Machine Smart 2 ọzụzụ. Ọ bụ onye nkuzi esemokwu. Enweghị frill, ọ dịghị mkpọrọhịhị.
Ka anyị hụ otu ọ ga - esi soro ndị ibe ya na - akwụ ụgwọ dị oke ọnụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-arụ ọrụ. Na mfe bụ ihe anyị nwere ebe a.
Onye na-enye ọzụzụ a bụ onye esemokwu esemokwu. Ọ bụ teknụzụ dị kemgbe ndị sneakers gbara gburugburu. Ọ na-ada ụda, ma ọ dị ọnụ ala, na-esi ike ma na-arụ ọrụ.
M na-akwọ ụgbọala mara ezigbo mma ugbu a, ọ na-ada nnukwu olu ma ọ ga-akachasị taya taya gị. I nweghịkwa. Aga m arụ ọrụ n'ime ụlọ n'echeghị ụlọ niile. (Trainer hums) Ma nke ahụ na-arụkwa ọrụ.
Ọ bụghị mmegide a pụrụ ịchịkwa, mana iguzogide ahụ dị nwayọọ. Ọ dịghị ọnwụ. Nwere ike iji mpempe akwụkwọ rụọ gas zuru ezu ma rapara ya na mgbidi.
Ọ dabara na ogwe ụgbọ ala gị. Mfe na-agbakọta na kaboodu mgbe anaghị eji ya. Maka $ 370, nke a bụ ma eleghị anya onye ọzụzụ kachasị mma ị ga-ahụ.
Ndị na-azụ ọzụzụ dị mfe mara mma bụ Elite Suito. Ọ bụ ihe ọhụrụ na-eme ngwa ngwa smart ọzụzụ si J.Randall. Naanị wepụtara n'oge ọkọchị.
Mbido bụ ikuku. Ha na-etu ọnụ na ọ dị jụụ. Ọ bụ n'ezie jụụ.
Soundda kachasị bụ igwe kwụ otu ebe m. Iguzogide mmegide dị ezigbo ire ụtọ. (Trainer clicks) Nke a enweghị ihe ọ bụla na-agagharị dị ka ndị ọzọ na-azụ ọzụzụ dịka Tacx na Kinetic nwere.
Obi onye nchịkwa ahụ anaghị agbanwe agbanwe. Ka na-eguzogide nkwụsi ike. Onye na-enye ọzụzụ a aghọwo otu n'ime ọkacha mmasị m ngwa ngwa maka ịdị mfe nke iji ya na ịdị mfe ya, Kickr Core bụ otu n'ime ndị na-azụ ọzụzụ nwere ọgụgụ isi kachasị ọnụ, mana na $ 100 obere Suito na-eme ezigbo okwu maka uru ka mma maka ego.
Ma nke a bụ onye nkuzi $ 28 Aldi anyị zụtara ma nwalee ya ozugbo na eziokwu, na $ 28 anyị tụrụ anya na ọ ga-agbaji ozugbo. Ọbụlagodi na ọ mebiri na nnwale izizi, ị nwere ike zụta 52 n’ime ndị a maka $ 28, jiri nke ọ bụla tupu ya abụrụ otu ọnụahịa dịka onye na-enye ọzụzụ $ 1,400. Ma anyị ga-abịaghachi ebe a ma ụgbọala ọzọ ma hụ ihe mere.
Ihe mbu anyi choputara bu na nguzogide adighi adi nma skuta na ihe ozo. Ọ dị ezigbo mma, ma anyị na-anọdụ ebe a na 250 watts, nke karịrị ezuru maka spinon nkịtị na ụbọchị oyi, udu mmiri. (Trainer hums) Ugbu a, anyị ga - anwa ịga obere ọsọ ọsọ.
Were decibel ọgụgụ. (Onye na-enye ọzụzụ na-ada ụda) Ugbu a, anyị nọ na 25 mph. Anyị gụrụ decibel 90, nke dị oke ụda (nchịkwa hums) na ikekwe karịa iji zuru oke iji mebie ụlọ gị dum, ọ bụrụ na ọ bụghị ndị agbata obi.
Ọ lanarịrị njem ọzọ. Agaghị m ekwu na ọ dị mma, mana onye na-enye $ 28 ọzụzụ dị ezigbo mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebe ụkwụ gị ka ọ na-agagharị n'oge oyi niile. Ndị a bụ ise n'ime sneakers kachasị amasị anyị.
Fọdụ na-eme ihe juru n'ọnụ na ihe mkpụcha niile dịka Tacx. Fọdụ dị oke ọnụ ala, ị nwere ike iji ha otu oge, tụfuo ha ma gaa zụta nke ọzọ. Gwa anyị ihe ị na-anya n’oge oyi a.
Hapụ anyị ikwu ma echefula ị zoo ndebanye maka ihe ndị ọzọ site na Bicycling. (egwu na-ada ụda)
Ndi Kinetic Road Machine na-arụ ọrụ na Zwift?
Nke # 3 -KineticinRide mmetụta
Tinye aKineticinRide mmetụta ka aKineticọmụmụ mmirionye ọzụzụi nweela. Nsogbu adighi, ma oburu naKineticọmụmụ mmirionye ọzụzụihe mmetụta inRide na-eme yaZwift dakọtara.
(egwu dị ndụ) may nwere ike ịhụla isiokwu anyị na-anya ụgbọ ala na Zwift may nwere ike ịhụla isiokwu anyị na-azụ na Zwift Na ị ga - ahụ, ejiri m nke ọma, hụla isiokwu nke Jens Voigt na - agba na Zwift. Amaghị otu esi eji ya wee kwee ya. Ndị a bụ azịza nye ụfọdụ ajụjụ Zwift na-ajụkarị na ụfọdụ atụmatụ ndị dị mkpa. (Popular Music) - Na-agba ịnyịnya Zwift ị chọrọ akaụntụ, ịtọ ya, gaa zwift.com.
Ugbu a ị nwere ike ịmalite site na nnwale n'efu. na mgbe na ị na-akwụ ụgwọ a kwa ọnwa na ndenye aha, na mgbe ahụ n'ezie na-agba ịnyịnya niile anyị chọrọ bụ ihe ime ụlọ ịzu na mgbe a ụzọ ka Zwift mara otú ike ị na-pedaling. Ugbu a dị mfe, nke ahụ nwere ike ịbụ ihe mmetụta ọsọ ọsọ dị ka ihe mmetụta Wahoo a nke na-agwa Zwift etu ngwa ngwa azụ azụ gị na-agba, ma site na kọmputa gị ma ọ bụ iPad gị ma ọ bụ iPhone gị, n'agbanyeghị ụdị ngwaọrụ ị na-eji ya, mita ike ga-Zwift Gwa ike gị n'ụzọ ziri ezi karị, mana ọ bụrụ na ịchọrọ iwere ya na ọkwa ọzọ, onye a na-akpọ smart trainer na-enwe mmekọrịta na Zwift.
N'ihi ya, ọ bụghị naanị na ọ na-agwa Zwift otú ike ị na-pedal, ọ na-agbanwe ego nke na-eguzogide ị na-eche na pedal, dabere na ihe na-aga, Zwift ma ọ bụrụ na ị na-arịgo ma ọ bụ na-arịda ugwu ị ga-ama banyere ya dị ka ị n'ezie mara mgbe ị na-awagharị azụ n'azụ onye ọkwọ ụgbọ ala ọzọ. Ugbu a echefula akwa nhicha ahụ na ọtụtụ mmiri mmiri, ịchọrọ ịnọ na mmiri ma gbalịa n'ezie idozi onwe gị ịpasa igwe kwụ otu ebe gị na mpaghara nke ọma ma ọ bụ jiri fan iji mee ka ị jụụ. Na ngwụcha, tupu anyị bido, ọ bụrụ na ị na-ejikọ laptọọpụ ma ọ bụ kọmpụta gị na Zwift ma ọ bụrụ na ị na-ebudata njikọ Zwift mobile site na Storelọ Ahịa App na ekwentị gị bụ nnukwu echiche n'ihi na ọ pụtara na ị na-eji nke a.
Ọ dị ka ime njikwa. Ha na-achịkwa ụyọkọ obere ọrụ na ọrụ anyị ga-aba n'ime ma emechaa. Naanị ihe ị kwesịrị ịma bụ na ekwentị gị jikọtara na otu netwọk WiFi dị ka kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ gị. (egwu dị egwu) Ugbu a enwere ụwa atọ dị iche iche ị nwere ike ịnya na Zwift, nke ọ bụla nwere mgbanwe na ụzọ dị iche iche.
Nke a bụ mbụ m ebe ahụ. (ọchị) E nwere Watopia, paradaịs South Pacific nwere ụzọ nt asatọ dị iche iche na ihe karịrị kilomita 42 nke ụzọ. Ma enwekwara ezigbo ụwa abụọ, nke mbụ bụ ụzọ Richmond 2015 UCI World Road Race nke nwere ụzọ anọ yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 19 nke okporo ụzọ tinyere ụfọdụ ụzọ awara awara.
Onye nke ọzọ ịhọrọ site na ya bụ London na nkuzi 2016 Prudential RideLondon. Họrọ n'etiti na-efe efe gara aga iconic London akara ma ọ bụ na-akwọ ụgbọala n'ime obodo na 17 kilomita nke ụzọ. Enwere ike ịchọta kalenda nke na-egosi mgbe usoro ọmụmụ ọ bụla dị na ụgbọala. - Ugbu a, anyị ga-ahọrọ ụzọ anyị wee pịa 'Drive'. (Bike hums) - Ugbu a, ọbụlagodi na ị na-agba ụzọ a kara aka, ịnwere ike ịgbanwe ekwentị gị mgbe ọ bụla ị na-aga n'okporo ụzọ ahụ akọwapụtara, yabụ m gbanwere wee pụọ aka ekpe, ugbu a ị ga-aga ogologo, na onye ọ bụla kwa n'oge ọ bụla ị nwere ike ịhụ otu enyi n'ụzọ, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịme ntụgharị.
Ka a pụọ. (ụda ọkụ) Nke a bụ isi ihuenyo ị hụrụ mgbe ị na-akwọ ụgbọala ka anyị lelee ihe ị ga-ahụ na Zwift, n'elu aka ekpe ị bụ ọgụgụ gị maka ike, kụrụ kwa nkeji na ntughari kwa nkeji. N'elu etiti dị n'etiti bụ ọsọ ọsọ ugbu a, nke a bụ ebe dị anya ekpuchi, nke a bụ elu gị dị ugbu a na oge kemgbe mmalite.
N'elu aka nri anyi nwere profaịlụ abuo, nke mbu bu mbughari-ebe i no n'okporo uzo tinyere udiri ugwu nke Simon na-agba ugbua na obere obere ahihia ndi na-ese n'elu mmiri bu ndi na-acho gi ohuru. na, nke a bụ profaịlụ ka ukwuu nke ụzọ niile. I nwere ike ihu onwe gi. Are bụ naanị akụ ebe ahụ ma enwere akara njedebe.
Ma ndepụta a dị ebe a, nke ahụ bụ ndepụta nke ndị ọkwọ ụgbọala nọ gị nso, na mkpokọta anyị nwere ndị ọkwọ ụgbọala 526 ọzọ na ụzọ ahụ. Ihe ọmụma dị ebe a na-egosi etu onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ dị n'ihu gị, mgbe ahụ, olee etu ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ ahụ dịruru n'anya. Enwekwara ọkọlọtọ obodo, elekere ugbu a kwa kilogram na etu ebe ị gara. (egwu dị mfe) - Can nwere ike ịdapụ? Ọfọn ị nwere ike Bu.
N'ezie, enwere ebe nlekọta GCN daycare dịka nhọrọ. Back to ịnya, mgbe ahụ n'ezie na ị nwere ike dị na-agba ịnyịnya naanị, ọ dịghị nnọọ ihe na-ezighị ezi na, ma olee banyere a na-awụlikwa elu na otu ìgwè na-agba ịnyịnya ma ọ bụ ọbụna a agbụrụ? N'oge dị iche iche gburugburu ụwa enwere ọtụtụ ihe omume na - eme maka onye ọ bụla Ọfụma ọkwa, site na ịnyịnya ndị otu na-aga n'ọsọ zuru oke na ihe niile dị n'etiti, isonye na mmemme ị ga - eme ihe niile ị nwere ike ime iji gaa menu isi. Pụrụ ịhụ ndepụta nke ihe ndị na-abịanụ n’ebe ahụ n’aka nri.
Naanị pịa ma ị ga-esonye, ​​ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ga-eme n'ọdịnihu Zwift nwere ndepụta niile. (Ìhè (egwu) Ihe ọ bụla ị na-agba na Zwift, ịnwere ike izipu ozi oge na otu ma ọ bụ otu mmadụ si na ngwa ngwa Zwift gị ma ọ bụ ozugbo na keyboard ma ọ bụrụ na ịchọrọ. M naanị pịnye 'Ndewo Enwere ezigbo ole na ole ekele na akara ngosi kwa, dị ka ndị ị ga-eji na ụwa n'ezie dị ka ebili mmiri, ọbụnadị ikpere aka na n'ezie ama Zwift Ride On Thumbs Up.
You nwere ike si ebe a Gbanwee echiche gị. (Egwú ndị a ma ama) - Naanị freestyle ma ọ bụ n'ezie ndị na-agba ịnyịnya ma ọ bụ agbụrụ, enwekwara nhọrọ ịme mgbatị ahaziri na ọnọdụ Ọzụzụ. Emebere nke ọ bụla iji meziwanye akụkụ dị iche iche nke ịnya ịnya gị, ikekwe ntachi obi ma ọ bụ ịrịgoro yana mmega ahụ ọ bụla.
Ha nwekwara atụmatụ mgbatị zuru ezu ma ọ bụrụ na ịmalite ile anya ị ga-ahụ mgbatị 32 GCN. Nke ahụ dị mma. Abanyeghị na ị na-emeziwanye ọsọ gị n'okporo ụzọ dị larịị, ịrị elu gị, ịgba ọsọ gị, ma ọ bụ na ị na-akwado maka ọsọ ahụ.
Ma ọ bụrụ n ’otu ihe kpatara na ha anaghị ese n’elu mmiri gị, ị nwere ike mepụta nke gị site na iji omenaala ma ọ bụ n’ezie mbubata ọrụ sitere na ebe ọzọ. (ọkụ ọkụ) - Ozugbo ịmalitere njem gị na Zwift, ị nwere ike ịlele ọtụtụ ozi na data, gụnyere njem gị dị anya, ọnụọgụ obi, ike ike, ịdị elu na ọbụlagodi calorie na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ee, a na-echekwa ọrụ ọ bụla na profaịlụ gị yana yana akaụntụ ọ bụla ịchọrọ ijikọ ka ọ dị ka TrainingPeaks ma ọ bụ Strava ma ọ bụ Atụmatụ nke Taa - Ee, enwere olile anya na nke a ga-eme ka ahụmịhe gị ka mma na Zwift ma nyere gị aka ịmeghe ụfọdụ ndị dị mma Atụmatụ. - Ee, kpam kpam.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ọdịnaya karịa ugbu a, nke mbụ anyị nwere ntakịrị ozi gbasara mmega ahụ, pịa ala n’ebe ahụ maka otu ma ọ bụ ihu agbụrụ Zwift, pịa mfe n’ebe ahụ. - Nke ahụ dị mma.
Kedu ka ị si eme Zwift na Kurt Kinetic?
MwepụtaZwiftna kọmputa ma rụọ ọrụ njikọiji ZwiftMobile njikọ. Họrọ Gear Icon ma họrọ 'Jiri ZwiftMobile Link 'ma ọ bụrụ na ịhọrọbeghị.Zwiftga-akpaghị aka na-achọ ngwaọrụejiMobile njikọ. Onye na - enye ọzụzụ agaghị ejikọ ma ọ gwụla ma ngwa ZML dị na otu WiFi dị ka kọmpụta ma gbanye ya.
(Tariq) Zwift bụ ihe kachasị ewu ewu na ịgba ịnyịnya ụlọ ime ụlọ. Ma ọ bụghị onye ọ bụla. Ozi ọma ahụ bụ na e nwere ụzọ ndị ọzọ na isiokwu a aga m eje ije gị site na ngwa itoolu dị iche iche iji dekọọ kilomita ime ụlọ gị. (Upbeat music) Hey gịnị bụ ụmụ okorobịa, Tariq ebe a si Smartbiketrainers.com Ya mere gịnị kpatara ngwa itoolu? Nọmba ndị iberibe na nọmba ndị na-adịchaghị mma.
Nke ahụ bụ eziokwu. Mana ahụla m ụdị mmelite ndị a na ọnwa iri na abụọ gara aga. Yabụ ị ga-enweta mmelite oge niile.
20 nkeji ab mgbatị
Ya mere, ha na-arụ ọrụ. Ọtụtụ n'ime ha nwere ụgwọ ọnwa kwa ọnwa. Mana m ga-agwakwa gị maka ngwa abụọ anaghị akwụ ụgwọ n'efu bụ ndị dị mma iji rapara na ya, ma ọ bụrụ na ịchọta edemede a aka, echefula ịpị bọtịnụ 'Dị ka' ma kesaa ya.
Ọzọkwa, m ga-achọ ịma nke ngwa ị chọrọ iji ma ọ bụ ngwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ihe karịrị otu ngwa n'otu oge. Yabụ mee ka m mara na ngalaba nkọwa. E nwere ụdị ngwa abụọ dị n’ebe ahụ.
Ngwa ndị g na-ahazi na Ọzụzụ ka ha wee nwee atụmatụ na mgbatị a kapịrị ọnụ, ị na-esokwa mgbatị ahụ. Mgbe ahụ ị nwere ngwa ndị na-anwa ịmegharị ụzọ gasị na ngwa ndị na-ebukarị akụkọ nke ụwa nke ụzọ a kapịrị ọnụ n'otu ebe, egwuregwu ịkwọ ụgbọala na-eme egwuregwu nke mepụtara ụzọ ụzọ ụwa ma ọ bụ usoro ọmụmụ emere. Appsfọdụ ngwa ọdịnala na-enye ma ahụmịhe ọzụzụ ahaziri ahazi na ahụmịhe ọkwọ ụgbọala mebere ụwa n'ezie.
Ya mere aga m ekewa ya ụzọ abụọ dị iche iche ma gafere gị na nke ọ bụla. Rouvy anọwo na-adị ogologo oge na ya na atụmatụ ya. Ego ị na-akwụ kwa ọnwa ga-efu gị ihe dị ka $ 6.25 kwa ọnwa maka otu ndị isi ma ọ bụ $ 10 kwa ọnwa maka ndị otu ha kacha elu.
Onu ogugu ndi mmadu na-enye uzo di iche iche ma i nwere ike ikpo ndi ozo n'ezinulo, nke bara oke uru ma oburu na inwere otutu ndi na-agba oso n'ezinụlọ gi Na Rouvy ị ga - enweta ụzọ gasị ndị a ị nwere ike ịmepụta na ụgbọala ma ọ bụ soro onwe gị na nnukwu data GPS maka ụzọ gasị ma ọ bụ ụzọ edemede. Ha na-etinyekwa eziokwu dịwanye elu m na-ekwu maka ya na m ga-ejikọ isiokwu ahụ ebe a.
Ọ bụ ihu ọma gị avatar enịm ke ata N'ezie. Na Rouvy ị nwere ike ịme njem otu, na-agba ịnyịnya na agbụrụ. Nwere ike ịmekọrịta ya na mpempe akwụkwọ ọzụzụ ma kwatuo mgbatị ahụ ụbọchị.
Mepụta mgbatị gị ahaziri ma ọ bụ họrọ mgbatị site na nnukwu ụlọ akwụkwọ ọzụzụ. Rouvy na-arụ ọrụ na ọtụtụ ANT gbakwunyere FEC Bluetooth Smart Na-atụpụkwa ndị na-azụ ọzụzụ na ihe mmetụta ọsọ ọsọ ma ọ bụ naanị mita ike. Ihe na-esote bụ FulGaz.
FulGaz na-enye ọtụtụ ụgbọ elu nkọwa dị elu. Ka ọ dị taa, enwere ụzọ 415 ma ọ bụ ihe dịka puku kilomita ise iji chọpụta. FulGaz na-arụ ọrụ kacha mma na Apple TV ma dakọtara na ọtụtụ ndị na-azụ smart smart na ọbụnadị Kickr Climb Tacx Neo virtual street feel.
Enwekwara ya dị ka ngwa nwa amaala na iPhone ma ọ bụ iPad. FulGaz anaghị enye ọbá akwụkwọ ọzụzụ ma ọ bụ usoro ọzụzụ ọzụzụ njikwa. FulGaz na-efu 9.99 kwa ọnwa ma ọ bụ $ 89.99 kwa afọ.
Ha nwere ikpe ikpe n'efu n'efu 14. N’ihi ya, nwaa ha. VirtuGo dị ọhụrụ na ebe ahụ.
Ha si na beta pụọ ​​wee bido na-akwụ ụgwọ maka ndenye aha ha kwa ọnwa. VirtuGo dị ka Zwiftwi nwere akụkọ amụma ụwa na usoro ọmụmụ ụwa ole na ole, mana itinyekwu ọzụzụ na ọzụzụ ahaziri ahazi. Ha nwere mmemme ọzụzụ dị iche iche maka ndị na-agba ọsọ n'okporo ụzọ, ndị na-arị ugwu, ndị na-anwale oge, ndị na-agba ọsọ.
Ha nwere ezigbo ọbá akwụkwọ mgbatị ahụ ị nwere ike ịchọgharị ma lelee nkọwa na nkọwa nnọkọ ma gbakwunye ọbá akwụkwọ mgbatị gị ma jikọta ya na kalenda gị. Agbanyeghị, dịka ọ dị taa, ọ dabara na ANT tinyere FEC. Yabụ ịchọrọ Antt gbakwunyere dongle ma ọ bụ anụ ọhịa nke ngwanrọ ma chọọ ezigbo kọmputa yana kaadi eserese mara mma iji gbaa ọsọ.
Ọ dakọtara na Mac na Windows ma ha enweghị ụdị mkpanaka. VirtuGo na-akwụ ụgwọ na euro ma ọ bụ 5.95 euro kwa ọnwa nke bụ ihe dị ka dollar isii na ọkara, dollar US nke na-abụghị ajọ ọbara ọbara nke ihe.
Ọzụzụ ụzọ bụ otu n'ime ndị ọkacha mmasị m. Ana m eji ya kemgbe 2011 mgbe ọ dị na beta. Erzọ Ọzụzụ nwere nnukwu ọbá akwụkwọ nke mgbatị ahụ siri ike.
Ọ dị ka ịnara ịgba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ triathlon maka $ 15 kwa ọnwa. Ozugbo ịtọsịrị ụzọ na-agba ọsọ, ị ga-edozi uru FTP gị. Atụmatụ ọzụzụ ọ bụla na-amalite site na nnwale FTP Ramp.
Mgbe ahụ ị nwere ike ịchọgharị ọtụtụ narị mgbatị ma ọ bụ mepụta atụmatụ ọzụzụ ahaziri ahaziri nke ọma maka triathletes, ndị na-agba ịnyịnya n'okporo ụzọ, ndị na-agba ọsọ n'okporo ụzọ wdg. nwedịrị ike ịkọwa ụbọchị mmalite ma dozie ụbọchị njedebe nke atụmatụ ọ bụla ma dozie mgbatị ahụ iji kwekọọ na usoro nke gị nwekwara nnukwu nchịkọta ọrụ iji nyochaa ime ụlọ gị ma ọ bụ n'èzí. Trainer Road nwere nnukwu obodo na-arụsi ọrụ ike na nnọkọ ha na Facebook ma ha nwere otu nnukwu Podcast ll.
Erzọ Ọzụzụ na-efu $ 15 kwa ọnwa ma ọ bụ $ 129 kwa afọ. Aga m agwa gị ntakịrị ihe nzuzo ebe a, ọ bụrụ na ị nwere enyi nwere ndenye aha onye ọzụzụ, jụọ ya ka o zitere gị koodu nnwale ụbọchị 30 n'efu. Ha kwuru na ha enweghị, mgbe ahụ ọ bụ oge ịchọta enyi ọhụrụ nwere ndenye aha onye ọzụzụ.
Trainer Road dakọtara na ngwaọrụ iOS, Windows, Mac na gam akporo ngwaọrụ. Na arụ ọrụ nke ọma na Bluetooth FTMS na ndanda tinyere ndị nkuzi FEC. Ihe na-esote bụ Sufferfest.
Ha anọwo na-adị ogologo oge ma na-ebipụta mmelite na isiokwu ọhụrụ mgbe niile. Echere m na ọ bụ nke mbụ ahaziri ịnyịnya ígwè isiokwu m mgbe na-ele na n'ezie ụtọ. Maka $ 12.99 otu ọnwa ma ọ bụ $ 99 kwa afọ, ị ga-enweta ohere na-enweghị njedebe na nnukwu ọbá akwụkwọ nke ịgba ịnyịnya ígwè, triathlon, na mgbatị na-agba ọsọ na ndekọ ederede nke agbụrụ ndị ọkachamara na akụkọ na-atọ ọchị.
Ndi otu a na-enyekwa gi ohere inweta yoga, nkuzi iguzogide echiche, na iku ume. Ọ bụ naanị ngwa nke gafere ịgba ịnyịnya na mgbakwunye nke All Workouts nke ga-emeju ịnya igwe gị ma mee ka ị bụrụ onye egwuregwu kachasị mma. Na na na, The Sufferfest na-agba na iPhone, iPad, Windows ma ọ bụ Mac.
O dikwa ya na ndi ANT gbakwunyere FEC na ndi nkuzi Bluetooth FTMS. Ihe na-esote bụ Xert, Xert dị iche, ụzọ Xert si arụ ọrụ, ọ na-enyocha ahụ ike gị ugbu a dabere na data arụmọrụ ị banyere ma na-agba ọsọ algorithm anwansi n'azụ Mpaghara ma kwado mgbatị ahụ dabere na ahụike na ebumnuche gị ugbu a. Na mgbakwunye, Xert na-agbakọ uru FTP gị na obere oge, yabụ na ịgaghị agba ọsọ ule FTP.
Ọ dị ezigbo mma ma ị nwere ike iji ọkpụkpọ weebụ ha jikọọ na onye na-enye gị ọzụzụ ma ọ bụ mita ike ma ọ bụ ngwa Xert iOS ọhụrụ ha. Na mgbakwunye, enwere ike ibudata mgbatị gị niile na faịlụ Erg ma ọ bụ Zwift ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ha na Zwift, dịka ọmụmaatụ. Xert na ndi oru ANT gbakwunyere ndi nkuzi FEC ma obu ndi Bluetooth Bluetooth FTMS dakọtara ma obu ike obula.
Ha nwekwara ngwa Garmin Jikọọ nke ị nwere ike iji na ngwa Garmin Edge gị wee megharịa ahụ ma ị chọọ. Ma ọ bụ gaa maka agbụrụ. Lelee ahụ ike gị nke ọma ma gbakọọ mbinye aka ahụike gị yana ike kachasị dị na oge, yabụ ọ bụrụ na ị nọ n'ọsọ na-agba mbọ ijide agba ikpeazụ, ngwa Garmin Jikọọ ga-amalite nke abụọ site na nke abụọ kwuo ọsọ ole arụmọrụ ị nwere, ọ dịkwa mma ịlele nke ahụ.
Xert na-efu 9.99 kwa ọnwa, ma ọ bụ $ 99 kwa afọ, ha nwere ikpe ụbọchị 30 n'efu. Velopro bụ ngwa ọzụzụ AI ọzọ.
Ihu ọma ị na-enye ihe ọmụma banyere onwe gị, mgbatị ahụike, atụmatụ mgbatị, agbụrụ na-esite na ya. Were ozi ahụ niile ma mepụta atụmatụ ahaziri maka gị n'oge na-adịghị anya. Nwere ike ịchọgharị kalenda iji lee nkọwa gbasara mgbatị na-abịanụ na njem ndị ị gwụchara.
Nwere ike akara ụbọchị anya ma ọ bụrụ na ị chọrọ na software ga-ịgbanwe oge maka gị. I nwekwara ike kaa ụfọdụ mgbatị ahụ dị ka mgbatị ụlọ ma ọ bụ n'èzí. Ndabara na-abụkarị mgbatị ahụ n'èzí, ma ọ bụrụ na ị kaa ya dị ka mgbatị ahụ n'ime ụlọ, ị nwere ike ibudata faịlụ Erg ma ọ bụ Zwift ma jiri ya na Zwift, dịka ọmụmaatụ.
O nweghi onye nkuzi ma obu ihe yiri ya. Yabụ ịkwesịrị ibudata mgbatị ahụ ma ọ bụ dee ya ma mee ya dị ka ụbọchị ochie. Velopro na-efu $ 10 kwa ọnwa ma ọ bụ $ 27 kwa nkeji iri na ise ma na-enyekwa nnwale ụbọchị 30 n'efu.
Atụmatụ ọzụzụ Velopro na Xert na-arụ ọrụ nke ọma maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ọ bụghị nke ukwuu maka egwuregwu atọ. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ịchọghị ịkwụ ụgwọ ihe ọ bụla, ndị a bụ ngwa ngwa abụọ anaghị akwụ ụgwọ maka gị. RGT ịnyịnya ígwè bụ a elu mma ime ụlọ ịgba ígwè na ngwa na ezi uche ndịna, n'ezie ọmụmụ na ezi uche mmegharị, na-agbasa n'ime nkuku, ịbịaru, wdg
O nwere ike ịbụ ezigbo ị nwere ike ịbanye na Zwift na-enweghị nọmba ndebanye aha ọnwa. Ngwa a bụ ihe kpụ ọkụ n'ọnụ, mana ewepụtara ya n'oge na-adịbeghị anya Apple TV na-abịa na ngwa ndị ọzọ iji jikwaa akụkụ niile nke ngwanrọ ahụ - ị ga-eji ngwa ngwa iji jikwaa ngwanrọ ahụ ọbụna na Windows ma ọ bụ PC PC. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na Apple TV, ma ndị na-ese foto na-agbadata ntakịrị ma ọ bụghị dị elu dị ka PC 4K.
Ọ bụrụ na ịnweghị PC egwuregwu, Apple TV bụ nhọrọ maka RGT. RGT bụ n'efu na cannwere ike ibudata ya ozugbo. Emere m nyocha zuru ezu na ya ọnwa ole na ole gara aga ma na-ejikọ ya ebe a, Ọ dị maka Mac, Windows, na Apple TV.
Ngwa na-esote free na otu ọkacha mmasị m bụ Max Trainer. Oke Onye na-enye ọzụzụ bụ ihe mepere emepe maka Windows na Mac ma ị nwere ike iji ya mee ọzụzụ a haziri ahazi ma lelee Netflix n'otu oge ahụ, yana Onye na-enye ọzụzụ kachasị ike ị nwere ike ịmepụta mgbatị nke gị na Workout Builder ma ọ bụ jiri otu mgbatị dị na Ergdb.org .
Emere m nyocha zuru oke na Onye na-enye ọzụzụ kachasị na oge ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị, m ga-ejikọta ya na elu ebe a na ala nke nkọwa dị n'okpuru. Ọ dị mma, ndị a bụ ụzọ anọ dị mma ọzọ na Zwift. Ugbu a buru n'uche na ọtụtụ n'ime ndị a enweghị mmekọrịta mmadụ na ibe gị nke ị jiri na Zwift, ọ bụ ezie na ịnya igwe RGT bụ n'efu, ọ ga-abụ na ị ga-anọ naanị gị.
Ma eleghị anya, nke ahụ bụ ihe ị na-achọ. Ọ dị mma, tha t bụ ihe niile m na-eme Mee ka m mara nke ị na-eji ma ọ bụ na-akwado na ngalaba okwu ma ọ bụrụ na ịnweghị nke ọ bụla ma jiri ụlọ Parmeter na Garmin gaa ụlọ akwụkwọ ochie, biko mee ka m mara. Dá »‹ kwa mma na echere m na á »‹ nwere isiokwu a
Daalụ maka ikiri na anyị ga-ahụ gị n'isiokwu na-esonụ. (Oshda ụda) (na-adọ ụda)
Kedu otu ziri ezi nke kinetic inRide?
Ijin'imepod na magnet na igwe na-eguzogide ihe na-agba ọsọ, anyị na-agba ọsọ na wiilị ma tụgharịa nke ahụ na ike site na iji usoro anyị. Ọgwụgwụ nsonazụ bụziri eziatụmatụ (+/- 3%) n'iji ụfọdụ ngwaike dị mfe ma dịkwa ọnụ ala.
Kedu ka ị ga-esi meziwanye njikwa okporo ụzọ?
Site na ihuenyo SENSORS, họrọ GEAR ICON na-esote gịonye na-enye ọzụzụaha ma tinye ihuenyo SENSOR SETTINGS. HọrọAKW .KWỌna ihuenyo SENSOR SETTINGS. Sorommezina-akpali ime ngwa ngwa ma gafee ụsọ mmiri. N'elu akuku ala a 'ammeziozi oma 'nammezinọmba ga-egosipụta.09.11.2020
Kedụ ka ị ga-esi wee mee Kurt kinetị?
Site na ihuenyo SENSORS, họrọ GEAR ICON n'akụkụ aha onye na-azụ gị wee banye na ihuenyo SENSOR SETTINGS. HọrọAKW .KWỌna ihuenyo SENSOR SETTINGS. Sorommezina-akpali ime ngwa ngwa ma gafee ụsọ mmiri. N'elu akuku ala a 'ammeziozi oma 'nammezinọmba ga-egosipụta.
Kedu otu onye na-azụ ịnyịnya ígwè si arụ ọrụ?
Ndị na-enye ọzụzụ gbasara ịnyịnya ígwèike na-eguzogide site mbịne a agụba n'ime akpa nkeọmụmụ mmiri. Nguzogide a na-aga n’ihu ma na-abawanye ka ọsọ ọsọ ọsọ na-abawanye.Ndị na-enye ọzụzụ gbasara mmirinye a ezi uche replication nke ndị na-eguzogide a onye na-agba ahụmahụ na n'èzí. Nguzogide na-abawanye ma ọ bụ na-ebelata na ọsọ ụkwụ.
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji dozie onye na-enye ọzụzụ?
Mechaa nkeji iri na-atọ ọkụ. Jiri nwayọ mee ngwa ngwa karịa 20mph ruo mgbe ọ ga - akwụsị ịkwụsị pedaling site naihengwa.Nantụpọ dị ụtọ maka oge spindowna KineticSmartonye ọzụzụma ọ bụ ihe mmetụta InRidebu1.5 ka 2.0 sekọnd. Ozugbo ngwa kpalirika''mmeziihe ịga nke ọma 'akwụkwọ, gaa na mgbatị.09.11.2020
Kedụ ka onye na-azụ ọzụzụ ike kwesịrị?
Wantchọrọ ka ihe akpọtụrụ ma ọ bụ igwe mkpọtụ ga-abụukoezu nke mere na taya anaghị ileghara ka ị na-aga ụkwụ, ma ọ bụghị otú ahụukona ọ na - abawanye na nguzogide enyere site naonye ọzụzụigwe n'onwe ya.
Kedu ka m ga-esi mezie onye na-enye m ọzụzụ?
Site naiheIhuenyo SENSORS, họrọiheGEAR ICON n'akụkụonye na-enye gị ọzụzụaha ma banyeiheNchọpụta ihe mmetụta SENSOR. HọrọAKW .KWỌn'imeiheNchọpụta ihe mmetụta SENSOR. Sorommezina-akpali ime ngwa ngwa ma gafee ụsọ mmiri. N'elu akuku ala a 'ammeziozi oma 'nammezinọmba ga-egosipụta.09.11.2020
Ngwa Kurt kinetic road machine njikwa dị mma?
Kurt Kinetic Road Machine Control bụ onye ọzụzụ siri ike, nke a pụrụ ịdabere na ya na nnukwu ego na-eme ka ọ bụrụ ebe ntinye dị mma ma ọ bụrụ na ị na-abanye na Zwift ma ọ bụ ọzụzụ ọzụzụ ime ụlọ ndị ọzọ. Legskwụ ụkwụ siri ike, njikọ QR siri ike ma na-ejide igwe kwụ otu ebe, ahụrụ m nnukwu ikuku ụgbọ elu n'anya.
Kedu ihe na-eme igwe ọrụ igwe eji arụ ọrụ dị mma?
Kinetic bụ otu n'ime ụdị ndị na-azụ igwe kwụ otu ebe na ụlọ ọrụ ahụ. Kinetic Road Machine ime ụlọ ịnyịnya ígwè na-anọpụ iche na ụdị ndị ọzọ na-azụ ọzụzụ mmiri n'ọhịa ya n'ihi ịdị mma onye ọrụ ya, ntụkwasị obi ya na ikike ya. E nwere ọtụtụ ihe n'anya banyere Kinetic Road Machine.
Kedu nnukwu igwe igwe igwe akwara jijiji?
Igwe igwe eji eme ihe eji eme ihe bu 16 x 22.4 x 32 sentimita asatọ ma tụọ 28lbs, wee mee ka ọ bụrụ otu n'ime ndị nkuzi kachasị ike na ndepụta anyị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ onye na-enye ọzụzụ ịnyịnya ibu, lee anya na nyocha anyị nke CycleOps. Heavybụ ibu adịchaghị njọ, ebe ọ na - enyere aka ị kwụsie ike.